तालिमका समस्या तथा चुनौतीहरू-ISSUES AND CHALLENGES OF TRAINING - सरकारी जागिर
तालिमका समस्या तथा चुनौतीहरू
ISSUES AND CHALLENGES OF TRAINING
मानव संसाधन व्यवस्थापकले गर्नुपर्ने कामहरू मध्ये मानव संसाधन विकास पनि एक हो । यसअन्तर्गत तालिम विकास कार्यक्रमहरू पर्दछन् । तालिम एक सिकाई अनुभव हो । तालिमले कर्मचारीहरूको व्यवहारमा स्थायी परिवर्तन ल्याउनुपदर्छ । उनीहरूको सीपस्तर एवं उत्पादकत्व बृद्धि हुनुपर्दछ । यसका लागि सङ्गठनको आवश्यकता अनुरुप उत्कृष्ट ढंगबाट तालिम ढाचा तयार गर्नुपर्दछ ।
वास्तवमा सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मानव संसाधन सीपयुक्त र कटिबद्ध हुनुपर्दछ । यसका लागि मानव संसाधन व्यवस्थापकले तालिम तथा विकास प्रक्रियामा बिशेष ध्यान दिनुपर्दछ । सङ्गठनको प्रकृति तथा कर्मचारीहरूको स्तरको आधारमा सतर्कता पुर्वक तालिम कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।
सङ्गठनमा तालिम कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । सङ्गठनमा विभिन्न तहका कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका हुन्छन् । उनीहरूले आ-आफ्नो तहबाट योगदान गरि सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्दछन् । यसरी हरेक स्तरका कर्मचारीहरूका लागि तालिम कार्यक्रम उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
भविष्यमा कर्मचारीहरूले के कस्तो कार्यसम्पादन गर्नुपर्दछ, सोही अनुसार अहिले तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । तालिम कार्यक्रमको ढाँचा तयार गर्दा व्यवस्थापकले निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ :-
१. लक्ष्य (Goal): प्रशिक्षार्थीहरूलाई कहाँ, कहिले, के, कस्तो सीप प्रदान गर्ने निश्चित गर्नुपर्दछ । तालिमको लक्ष्य र उद्देश्य पनि निश्चित गर्नुपर्छ । यो चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।
२. संरचना (Structure): तालिमको संरचना तर्जुमा गर्नु पनि एक महत्वपूर्ण विषयवस्त हो । तालिममा सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक शिक्षणको अनुपात निर्धारण गर्नुपर्दछ । यो कार्य निश्चय पनि जटिल छ।
३. सिकाइ सिद्धान्त (Learning principles): सिकाइका अनेक सिद्धान्तहरू छन् । तालिम ढाँचामा कुन सिकाइ सिद्धान्त समावेश गर्ने भने कुरा यकीन गर्नु एक गहन विषय हो ।
४. शैक्षिक सामग्री (Training materials): तालिम कार्यक्रममा समावेश गरिने शैक्षिक सामग्रीहरू तालिम ढाँचामा उल्लेख गर्नुपर्छ । साथै तालिमको पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रम पनि निश्चित गर्नुपर्छ ।
५. कार्य विभाजन (Division of work): तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि जनशक्ति निश्चित गर्नुपर्छ । साथै क-कसको जिम्मामा के कस्तो कार्यभार हुनेछ भन्ने कुरा समेत निर्धारण गर्नुपर्छ । यो निर्धारण गर्नु त्यत्ति सजिलो छैन ।
६. वित्त (Finance): तालिमको निश्चित लागत पर्छ । तालिमका हरेक क्रियाकलापमा के कति बजेट आवश्यक छ भन्ने कुरा निश्चित गर्नुपर्छ । तालिम प्रभावकारितामा ध्यान दिएर लागत लाभ (Cost benefit) हुने गरी वित्त व्यवस्था गर्नु निश्चत पनि चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।
September 22, 2018 July 24, 2019 Sarakari Jagir
वासलात भनेको के हो ? कसरि तयार गर्ने ?
कार्यमूलक लेखापरिक्षण (Performance Audit) भनेको के हो ?